Soodejiye Smart Smart Wake up: sameecadda digniinta leh ee leh Alexa | War gadget
Eder Esteban | | Afayeenada, Sawir iyo dhawaq
Waxyaabaha ugu dambeeya ee Sistem-ka Tamarta ayaa naga tagaya IFA 2019 waa suurtogalnimada ugu casrisan ama la yaab leh dhammaan. Shirkaddu waxay soo bandhigaysaa Smart Speaker Wake Up, kaas oo ah ku hadla qalabka digniinta, kaas oo la yimaada Alexa oo isku dhafan kaaliye ahaan. Wax soo saar ku sii dhex jira qaybta maqalka, in kasta oo ay xaaladdan ku jirto dhawr adeegsi oo kala duwan.
Qaabkan waxaa loo bilaabay si loo dhameystiro kala duwanaanta sii kordheysa ee kuhadlayaasha shirkadda. Intaas waxaa sii dheer, Smart Speaker Wake Up waa afhayeenka ugu horeeya ee caqli badan waxaa laga bilaabay suuqa adeegsada qalabka digniinta raadiyaha waxayna leedahay shaashad ballaaran. Badeecad ay Sistem Tamarta ku dooneyso inay kaga yaabiso dadka isticmaala.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Smart wake wake waxaa loo soo saaray si loo buuxiyo noocyada kala duwan ee astaanta. Waa moodal leh wax kasta oo aad u baahan tahay si aad maalinta ugu bilawdo sida ugu macquulsan uguna habboon ee shaqsiyeed. Qalabkani wuxuu leeyahay teknoolojiyad badan iyo fursado loo maqli karo oo kala duwan oo la jaan qaadi kara Spotify iyo Airplay si loogu raaco isticmaalaha muusigga ay jecel yihiin maalintii oo dhan.
Ka sokow ku darista kaaliyaha dalwaddii ah ee 'Alexa', wuxuu leeyahay ku hadla teknolojiyad Bluetooth 5.0 ah iyo nidaam qollo badan u gaar ah oo uu ku dhagaysto muusigga silig la'aan markasta oo aad rabto. Waxay bixisaa 2.0 stereo sound iyo 10 W oo awood leh oo leh nidaamka kobcinta basaska, iyada oo loo marayo xuub laba jibaaran oo ka dhigaya qofka isticmaala inuu ku raaxeysto dhawaaq cad oo tayo sare leh. Sistem-ka Tamarta ayaa sidoo kale soo bandhigaya xeedho wireless ah la jaan qaada heerka Qi.
Smart Speaker Wake Up sidoo kale wuxuu leeyahay hal dekedda amraya USB-ga iyo hal aqbasho cod-bixiye ah ku jira 3,5mm minijack, si loogu xiro qalab kasta oo kale. Dhammaan xulashooyinkaan sidoo kale waa lagu qaabeyn karaa habka saacadda alaarmiga. Waxay sidoo kale isku daraysaa shaashad ballaaran oo loogu talagalay daawashada saxda ah dhammaan xaaladaha iftiinka waxayna bixisaa suurtagalnimada in la xakameeyo xooggeeda.
Qaylo-dhaanta qaylo-dhaanta ahi waxay kuu oggolaaneysaa inaad barnaamij u diyaariso illaa laba digniin oo madax-bannaan. Tusaale ahaan, waxay taageertaa mid maalmaha shaqada iyo mid dhammaadka usbuuca. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay shaqo dib u dhac ah oo seexdo 10kii daqiiqaba. Shaki la'aan, badeecad cajiib ah oo ka socota Nidaamka Tamarta.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Tamarta Sistema waxay soo bandhigeysaa Smart Speaker Wake Up, oo ku hadla digniinta leh Alexa
Nidaamka Tamarta wuxuu soo bandhigayaa noocyo cusub oo kuhadlaya